‘विवाह गर्छु’ भनेर प्रेमीले बोलाएर गएकी यीनलाई ५ दिन सम्म यस्तो हर्कत गरेपछि – live 60media
कञ्चनपुरमा एउटी १४ वर्षकी बालिकालाई ६ जनाले एउटा कोठामा ५ दिन सम्म राखे । आफुले मन पराएको एक जना युवकले उनलाई बोलाएका थिए । आफ्नै प्रेमीले बोलाएपछि नजाने कुरै भएन । उनी गइन् । तर ति युवकको नियत भने अर्कै रहेछ । उनले एउटा कोठामा लैजान्छन् त्यहाँ अरु युवा पनि हुन्छन् । ५ दिन सम्म उनलाई औषधी खुवाउँछन् । त्यसैले उनले आफु माथि के भयो भन्ने पनि थाहा पाएकी छैनन् ।
← ६ जना एकै परिवारका दिदीबहिनी प्रहरीमा जागिरे…
दु:खद खबर !! बसको ठ’क्करबाट दुधे बालकसहित श्रीमान्, श्रीमतिको मृ’त्यु…. रोचक →